Tuesday May 11, 2021 - 14:17:19 in Wararka by Xarunta Dhexe
Waxaa uu sheegay in marnaba aan meel lagu gaari karin qabaa'ilaad sida uu hadalka u dhigay is eryanaya oo midba kan kale uu riixayo, isaga oo intaa ku darray in marka laga eego Itoobiya lagu jiro tartanta dhinca qowmiyadaha ah.
''Qabiil is eryanaya iyo ururro qabaa'ilaad isku eryanaya dowlad deegaanka Soomaalida ma anfacayaan, waxa kaliya aan ku socon karno guulna ku gaari karno waa midnimo Soomaaliyeed, maanta Itoobiya marka aad eegto waxaa lagu jiraa tartan qowmiyad ah, sidaa daraadeed waa in aynu raadinaa midnimo Soomaali isku mid ah'' ayuu yiri Mustafe Cagjar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida.
Wuxuu sheegay in marnaba aan la diidaneyn mucaarad iyo in la dhaliilo dowladda, laakiin loo baahan yahay isku tanaasul iyo horay loo sii wada socod.
''Dowladda Boqolaal dhaliilood ayeey leedahay, qaar annaga ayaa og, qaar shacabka ayaa og, laakiin waxaa u baahannahay isku tanaasul iyo laga wada shaqeeyo in wax walba horay u sii socdaan oo aan gadaal loo noqon'' ayuu yiri hadalkiisa sii raaciyay.
Muddadii ay jirtay Xukuumdda dowlad deegaanka ee uu madaxweynaha ka ahaa ayuu sheegay in ay ku guuleysteen inta badan balanqaadyadii ay horay u sameeyeen oo ay ka mid aheyd in ay soo celinayaa astaamihii Soomaaliyeed iyo dadka noqdaan kuwo xor u ah afkaartooda iyo aragtidooda siyaasadeed.
Ugu danbeyntii ayuu sheegay in Xisbiga uu hoggaamiyo uu sii laba jibaari doono geeddi-socodka horumarineed ee deegaanka haddii la doorto